Seventh Pillar - Kooxda Dagaalyahanada Islaamka Liibiya
Dhowr hogaamiye oo ka mid ahaa Kooxdii Dagaalyahanada Islaamka ee Liibiya – oo markii hore xiriir hoose uu ka dhaxeeyay Al-Qaciida – ayaa waxay soo saareen qoraal ka kooban 400 oo bog oo ay ku canbaareeynayaan fikradaha dagaalada ay wadaan Al-Qaciida 17 Sebtember 2009.
Qoraalkaasna waxaa ku jiray erayadaan la soo turjibaanay ee hoose:
Ku soo gaabinta Jihaadka in lagu dagaalamo seef oo kaliya waa arin qalad ah iyo gaabisa.
Waa mabnuuc in Jihaad la aado iyadoon fasax laga haysan waalidkaa iyo qofkii deyn kugu leh.
Waxaa jira sharuuc iyo hab loo maro Jihaadka – kuwaas waxaa ka mid ah: Jihaadku inuu yahay Ilaahay daraadiis, iyo inay sharci daro tahay in la dilo haweenka, caruurta iyo waayeelkaba….
Sidoo kale sharuucdaas iyo hababkaas waxaa ka mid ah in aadan amarka diidi karin, inay qasab kugu tahay inaad axdiga dhowrto, inay qasab kugu tahay inaad maxaabiista dagaalka u naxariisato, iyo inay mabnuuc tahay in la jarjaro korka qofka meydka ah…..
Fikradaha dadkii axsaabta u ahaa Nabi Maxammad waxay isku raaceen in aysan banaaneeyn in dagaal lagu badalo xaalada siyaasada.
U dagaalanka sababo fiqro diineed, qabiil ama xaalad bulshonimo iyo u dagaalanka sababo aduunyo ama doonitaan awoodeed waxa uu galayaa qeybta dagaalada sokeeye ee la mabnuucay.
Hababka lagu badalan karo in la isticmaalo dagaal si wax loo badalaa waa in la isku kaashado waxa wanaagsan iyo Dacwada iyo in la iska daayo xaaranta laga mabnuucay.
Tusaalooyinka taariikhiga ah ee ay dadka sunada Nabiga raacay ay qaateen waxaa ka mid ah: inay mabnuuc tahay in lala dagaalamo hogaamiyayaasha iyo madaxda wadankaas, iyo heshiiskoodii ahaa in la isku waco in llaahay wanaagiisa la soo raaco iyo in la iska ilaaliyo wixii laga xaarintimeeyay in ay tahay habka saxdaa.
Qaar ka mid ah sababaha xag jirnimada waxa weeye In bulshooyinka Muslimiinta dhexdooda ay denbiyadu ku bateen, inay ka maqan tahay bulshadu fahmida saxdaa ee diinta iyo run ahaanta, dareen xaraado, dad aan aqoon lahayn oo noqday maamulayaal iyo maqnaanshaha waxbarasho guud iyo waxyaabo kaleba.